साथीहरूसँग घडी 1
प्रतिलिपि अधिकार, 1906, HW PERCIVAL द्वारा।
हामी कसरी हाम्रो अन्तिम अवतारमा भएको छ भनेर भन्न सक्छौं? व्याख्यान पछि अर्को रात एक आगन्तुक सोधे।
बताउने एक मात्र तरिका भनेको हामी पहिले को हौं भनेर सकारात्मक रूपमा जान्नु हो। यो ज्ञान आउने संकाय एक उच्च अर्डर को, स्मृति हो। यसको अभावमा, प्रत्येकले आफू वास्तवमै के मनपर्दछ भनेर पहिले के थियो भनेर अनुमान बनाउन सक्छ। यो मान्नु मात्र उचित छ कि यदि यस विषयमा हामीलाई केहि विकल्प छ भने हामी त्यो अवस्था वा वातावरणको रूपमा छनौट गर्दैनौं जुन हामी आउँदछौं, जस्तै हाम्रो स्वाद वा विकासको लागि असमर्थ थियो र, अर्कोतर्फ, हामीसंग कुनै विकल्प छैन, त्यसोभए, पुनर्जन्म संचालन गर्ने कानूनले हामीलाई विकासको लागि अयोग्य परिस्थितिमा राख्दैन।
हामी सहानुभूति महसुस गर्छौं वा केही आदर्श, चरित्र, व्यक्ति वर्ग, मानिसका प्रकार, शिल्प, पेशा, कला र व्यवसायहरु का विरोध गर्दछौं र यसले संकेत गर्दछ कि हामीले यसका लागि काम गरिसकेका छौं वा विरूद्ध। यदि हामी घर मा वा राम्रो वा नराम्रो समाजमा सहज-सहज महसूस गर्छौं भने त्यसले त्यो स acc्केत गर्दछ जुन हामी पहिले बानी भएको थियो। पुरानो घाँटी वा धुलोको देशको सडकमा आफूलाई सुस्त बनाउने बानी एउटा ट्राम्प, शिष्ट समाज, रसायनशास्त्र प्रयोगशाला, वा रोष्टममा आरामदायी महसुस गर्दैन। न त जो एक सक्रिय मेहनती मानिस थियो, मेकानिकल वा दार्शनिक झुकाव भएको, सहज र सहजै आफूलाई धपाउने, धुने कपडामा डुबाएर।
हामी विशुद्ध जीवनसँग हामी विगतको जीवनमा के थियौं त्यो वर्तमानमा धन वा स्थितिबाट नभई हाम्रो आवेग, महत्वाकांक्षा, मनपराउने, मन नपर्ने, मनपर्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई वर्तमानमा आकर्षित गर्छौं भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सक्छौं।
हामी बताउन सक्छौं कि हामी पहिले जन्मेको कति पटक?
शरीर जन्मन्छ र शरीर मर्दछ। आत्मा न जन्मिएको छ न मर्दछ, तर शरीरमा जन्म गर्दछ जुन जन्म हुन्छ र शरीरलाई शरीरको मृत्युमा छोड्दछ।
यस संसारमा एक जना मान्छेले कति जना जीवन बिताएको छ भनेर जान्न संसारका विभिन्न रेसहरूमा एक नजर हेर्नुहोस्। एक अफ्रीकी, वा दक्षिण सागर टापुको नैतिक, मानसिक र आध्यात्मिक विकास विचार गर्नुहोस्; र त्यसपछि न्युटन, शेक्सपियर, प्लेटो, बुद्ध, वा क्रिष्टको। यी चरम बिचको बिच विकासको बिभिन्न स्तरहरुको बारे सोच्नुहोस् जुन मानवताले प्रस्तुत गर्दछ। यो पछि सोध्नुहोस् "म" यो चरम बीच खडा कसरी।
स्थिति औसत भएपछि हेर्नुहोस् कि वर्तमान जीवनको अनुभवबाट मैले कत्ति “म” सिकेकी छु — साधारण मानिस सिक्छ तर थोरै - र कसरी "म" मैले "के" काम गरेको छु भन्ने व्यवहार गर्दछु। यो चाखलाग्दो प्रश्न पछि, हामी सायद वर्तमान राज्यमा पुग्नको लागि बाँच्नको लागि कति समय आवश्यक भएको हुन सक्छ भन्ने बारे केही विचार बनाउँछौं।
कुनै एक व्यक्ति को लागी ऊ भन्दा पहिले कति पटक बाँच्यो भनेर बताउने कुनै तरिका छैन विगतबाट निरन्तर चेतना र निरन्तर चेतना बाहेक। यदि उसलाई दुईपल्ट वा पचास हजार चोटि बाँच्न भनियो भने उक्त जानकारीले उसलाई कुनै फाइदा गर्दैन, र ऊ आफैंको आत्माबाट आउने ज्ञान बाहेक यो प्रमाणित गर्न सक्षम हुँदैन। तर दिइएको दृष्टान्तले हामीले सायद करोडौं वर्षको बारेमा केही विचार बनाउँदछौं जुन हामी वर्तमान अवस्थामा पुगिसकेका छौं।
के हामी हाम्रो पुनर्जन्म को बीच सजग हो?
हामी। हामी शरीरमा जीवनको क्रममा जस्तोसुकै चेतनमा छैनौं। यो संसार कार्यको क्षेत्र हो। यसमा मानिस बाँच्दछ र हिड्छ र सोच्छ। मानिस सात व्यक्ति वा सिद्धान्तहरूको बनेको वा बनेको एउटा कम्पोजिट हो। मृत्युको बखत मानिसको ईश्वरीय अंश घोर भौतिक हिस्साबाट आफूलाई अलग गर्दछ, र ईश्वरीय सिद्धान्त वा पुरुषहरू तब एउटा अवस्था वा स्थितिमा बस्छन् जुन सम्पूर्ण जीवनमा विचारहरू र कार्यहरूद्वारा निर्धारित गरिएको हो। यी ईश्वरीय सिद्धान्तहरू मन, आत्मा र आत्मा हुन्, जुन उच्च इच्छाको साथ, पृथ्वीको जीवनले निर्धारण गरेको आदर्श अवस्थामा प्रवेश गर्दछ। यो अवस्था जीवनको बिचार वा विचार भन्दा बढि हुन सक्दैन। यी सिद्धान्तहरू घोर भौतिक अंशबाट विच्छेदन भएकोले उनीहरू जीवनको नराम्रो प्रति सजग हुँदैनन्। तर तिनीहरू सचेत छन्, र जीवन समाप्त भएको जीवनमा गठन भएका आदर्शहरू बाहिर बाँचिरहेका छन्। यो विश्रामको अवधि हो, जुन आत्माको प्रगतिको लागि आवश्यक छ र रातमा आराम गर्दा आउँदै गरेको दिनको क्रियाकलापहरूको लागि शरीर र दिमाग फिट हुन आवश्यक छ।
मृत्युको क्रममा, नश्वर सिद्धान्तहरुबाट ईश्वरीय को बिच्छेदले आदर्शहरु बाट बाँच्नेहरुको आनन्दको अनुभव गर्न दिन्छ। यो पुनर्जन्म बीचको सचेत राज्य हो।
आदम र हव्वाको पुनर्मिलन को उपसामान्य विचार के हो?
जहिले पनि यो प्रश्न थियोसोफिष्टको बारेमा सोधेको थियो यसले मुस्कान दियो, किनकि आदम र हव्वा यस संसारमा बसोबास गर्ने पहिलो दुई मानव व्यक्तित्व हो भन्ने धारणालाई आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले यसको बेतुकापनमा देखाइएको छ। बारम्बार आउँछ।
राम्रोसँग जानकारी भएका व्यक्तिले एकैपटक भन्नेछन् कि विकासले यस कथालाई दन्त्यकथाको रूपमा देखाउँदछ। थेसोसफिस्ट यससँग सहमत छन्, तर मानव जातिको प्रारम्भिक इतिहास यस मिथक वा दन्त्यकथामा संरक्षित गरिएको छ भन्ने भनाइ छ। गोप्य सिद्धान्तले देखाउँदछ कि मानव परिवार आफ्नो प्रारम्भिक र प्राथमिक राज्यमा पुरुषहरू र महिलाहरू मिलेर बनेको थिएन, तर वास्तवमा त्यहाँ यौन थिएन। त्यो बिस्तारै प्राकृतिक विकास मा एक दोहरो सेक्स वा hermaphroditism, प्रत्येक मानवमा विकसित भयो। त्यो पछि पनि लिंग विकसित गरियो, जसमा वर्तमानमा मानवता विभाजित छ।
आदम र हव्वाको अर्थ एक मानिस र एउटी महिला होइन, तर सम्पूर्ण मानवता हो। तपाईं र म आदम र हवा हौं। आदम र हव्वाको पुनर्जन्म मानव आत्माको बिभिन्न जन्मजात शरीर, धेरै मुलुकमा र विभिन्न जातिहरूमा पुनःजन्म हो।
Reincarnations को बीच नियुक्त गरिएको समय को लम्बाइ के हो, यदि कुनै निर्दिष्ट समय छ भने?
यो भनिएको छ कि अवतारहरू बीचमा, वा एक शरीरको मृत्युको समयदेखि जबसम्म आत्माले आफ्नो वासलाई अर्को ठाउँमा राख्दैन जुन संसारमा जन्मन्छ, लगभग १ fifteen सय बर्ष हो। तर यो कुनै पनि हिसाबले सबै व्यक्तिहरूमा लागू हुँदैन, र विशेष गरी सक्रिय विचारधारा भएका आधुनिक पश्चिमी मानिसका लागि होइन।
असल मानिस जसले स्वर्गको लागि चाहान्छ, जसले यस संसारमा राम्रो काम गर्दछ र आदर्श र विचित्र कल्पना गर्दछ, जो स्वर्गमा सदासर्वको लागि चाहान्छ, एउटा स्वर्गको विशाल अवधि हुन सक्छ, तर यो सुरक्षित छ कि यो भन्नु सुरक्षित छ आजको औसत मान्छे होईन।
यस संसारको जीवन कार्यको क्षेत्र हो जसमा बीउ छर्दछ। स्वर्ग एक राज्य वा आरामको अवस्था हो जहाँ दिमाग यसको मजदुरहरूबाट विश्राम गर्दछ र जीवनमा काम गर्दछ जुन पुनःजन्म हुन सक्छ। दिमाग फिर्ता तान्ने अवधि पछि यो जीवनमा के गरेको छ र यो कहाँ यो आफ्नो विचार राखेको छ निर्भर गर्दछ, जहाँ विचार वा आकांक्षा त्यो ठाउँ वा अवस्थाको लागि मन जानेछ जहाँ। अवधि हाम्रो वर्ष मापन गर्न छैन, बरु गतिविधि वा विश्राम मा आनन्द को लागी दिमाग क्षमता द्वारा। एक समय मा एक क्षण अनन्त काल देखिन्छ। अर्को क्षण फ्ल्यास जस्तै बित्छ। हाम्रो समयको मापन, त्यसकारण, ती दिनहरू र बर्षहरूमा होइन जुन आउँछ र जान्छ, तर यी दिनहरू वा बर्ष लामो वा छोटो बनाउने क्षमतामा।
पुनर्जन्महरूका बीच स्वर्गमा रहिरहनको लागि समय तोकिन्छ। प्रत्येकले यसलाई आफैं नियुक्त गर्दछ। प्रत्येक मानिस आफ्नै जीवन जिउँछ। जतिसुकै प्रत्येकको विस्तारसँग फरक छ भने समयसँग कुनै निश्चित वक्तव्य छैन जुन प्रत्येकले आफ्नो विचार र कार्यबाट आफैंलाई आफैं बनाउँदछ र यो लामो वा छोटो छ भने त्यसले बनाउँछ। एक भन्दा कममा एकले पुनर्जन्म गर्न सम्भव छ, यद्यपि यो अनौंठो हो, वा हजारौं बर्षको अवधि विस्तार गर्न।
हामी पृथ्वीमा फर्किने बेला हामी हाम्रो व्यक्तित्व परिवर्तन गर्छौं?
हामी उस्तै तरिकाले गर्छौं जब हामी यसको उद्देश्य पूरा गर्दछौं र कपडाको सूट परिवर्तन गर्दछौं र अब आवश्यक छैन। व्यक्तित्व मूलभूत पदार्थबाट बनेको हुन्छ, जीवनको सिद्धान्तको साथ एनिमेटेड, निर्देशन द्वारा निर्देशित र इच्छा द्वारा प्रचारित, मनको तल्लो चरणहरू यस अन्तर्गत पाँच इन्द्रियको माध्यमबाट कार्य गर्दछ। यो संयोजन हो जुन हामी व्यक्तित्व भन्छौं। यो जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवधिमा मात्र अवस्थित छ; इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा सेवा गर्दै जुन दिमागले काम गर्दछ, संसारसँग सम्पर्कमा आउँछ, र त्यहाँ जीवनको अनुभव गर्दछ। मृत्युको बखत यो व्यक्तित्वलाई अलग राखिन्छ र पृथ्वी, पानी, हावा, र आगोको तन्त्रमन्त्र तत्वहरूमा फर्कन्छ, जहाँबाट यसलाई कोरिएको थियो र संयुक्त गरिएको थियो। मानव मन तब विश्रामको स्थितिमा जान्छ र यसको मजा लिने बित्तिकै यसले निर्माण गर्दछ र अर्को व्यक्तित्वमा प्रवेश गर्दछ जुन विश्वमा आफ्नो शिक्षा र अनुभव जारी राख्नको लागि हो।